Khubaro ka Digay “Bombka Maaskaraha” | Xaqiiqonews
Khubaro ka Digay “Bombka Maaskaraha”
Khubaro ka tirsan jaamacadda “Southern Denmark”, ayaa ka digaya halista weyn ee ka dhalan karta 30 milyan maaskaro oo la iska tuuro ilbiriqsi walbo dunida dhan, taasi oo sida la saadaalinaayo musiibo ku keeneysa deegaanka.
Tan iyo markii uu bilowday cudurka safmarka ah ee Karoona, maaskaraha ama af-xirka ayaa loo isticmaalayey sida direeska taasi oo dadka ay ka gaashaamanayeen feyruska Karoona.
Khubarada waxa ay leeyihiin maaskaraha ayaa ugu halis badan deegaanka marka loo barbardhigo bacaha, maxaa yeelay ilaa hadda ma jirto qaab dib loogu isticmaali karo maaskaraha.
Xaansho cilmi baaris ah oo jaamacaddan ay ka diyaarisay maaskaraha ayaa ka warmeysa in qiyaastii 43 milyan oo maaskaro ah la soo saaro bil walbo taasi oo aan ka yareyn cadadka dhalooyinka balaastikada ah.
Sidoo kale Aqri: Maaskaro Caqli Leh Oo Hadlaaya!
Culimadan ka socotay jaamacadan Denmarka waxa ay aaminsanyihiin maaskaraha la tuuro in dunida uu uga dhigan yahay “bambo waqtiyeysan”, khubarada waxa au intaasi ku darayaan in waxyaabaha uu ka sameysan yahay maaskaraha awgeed aysan suurtagal noqon karin dib u warashadeyntooda.
Webseetka maxaliga Hindiyaanka ah ee “NDTV” , waxa uu tilmaamayaa haraadiga Karoonaha Hindiya oo kaliya in ay gaartay 18 kun oo tan, kaliya intii u dhaxeysay bilihii Julaay iyo September.